मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथिको कारवाहीका बारेमा सरकारका प्रवक्ताले गरे यस्तो खुलासा — sancharkendra.com
मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथिको कारवाहीका बारेमा सरकारका प्रवक्ताले गरे यस्तो खुलासा
काठमाडौं । सरकारले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न र तयार रहेको बताएको छ । तर, लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनकै भरमा अहिले नै कसैलाई निलम्बन तथा कारबाही नगर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले उपसमितिले लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै निचोड जसरी सार्वजनिक गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
यद्यपि समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, ‘उपससमितिले प्रतिवेदन दिएकै छ । अब समितिले अब के भन्छ ? कसरी आउँछ ? त्यसपछि सरकारले पनि न्यायिक समिति बनाउन उपयुक्त हुन्छ भने हामी तयार नै छौं ।’
तर, सरकारले अर्को समिति बनाउँदा ढाकछोप गर्न बनायो भन्ने हो कि भन्ने उनको आशंका छ । उनले भने, ‘विगतका पराम्परा, अभ्यास, कानुनी प्रावधान हेरेर समिति बनाउन तयार छौं । त्यसको निचोड नआएसम्म कसैमाथि अभियोग लाग्नासाथ प्रमाणित मानिँदैन । प्रमाणित हुने धेरै निकाय पार गर्नुपर्छ ।’
प्रमाणित भएपछि मितको छोरा, आफ्नो छोरा नभन्ने तर, अहिले नै कसैलाई कारबाही नगर्ने बताए । ‘कुनै कुरा आउनासाथ अन्तिम फैसलाका रुपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन । छानविनको उचित निष्कर्ष आओस्’, मन्त्री बास्कोटाले भने ।
यसैबीच नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा अन्र्तगतको उपसमितिको बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको हो। निगमको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।
के भन्छन् प्रधानमन्त्री ओली ?
यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी प्रकरणमा उपसमितिको प्रतिवेदनबाट आफू आश्चर्यचकित भएको र नरमाइलो लागेको प्रधानमन्त्रीले टिभी अन्तरवार्तामा बताएका छन्।
प्रतिवेदन उपर प्रधानमन्त्रीको के प्रतिकृया रहला भन्ने ‘सस्पेन्स’ हिजै ‘क्लियर’ भएको छ। यद्यपि आज बिहीबारको संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने तयारी छ। संसदको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको थप प्रतिकृया आउने अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनले औंल्याएका सार पक्षमा भन्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै मिडियामा चुहिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक उत्ताउलो पारामा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘खुबै बाघका जुँगा उखेलेको’ जस्तो नहौसिन समितिलाई सचेत गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ- प्रतिवेदनमा आएका बाघका जुँगा हुन् कि हातका रौँ (भुत्ला) ?
प्रारम्भिक प्रतिकृयालाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने रूचि देखाएका छैनन्। उल्टै त्यसको प्रतिवाद गर्ने लाइनमा प्रधानमन्त्री उभिने देखिन्छ। संसदको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर थप छानविन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
उनले सरकारको तर्फबाट पनि गम्भीरतापूर्वक छानविन हुने भन्दै दोषी जो कोहीलाई पनि कारवाही हुने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया के आउला भन्ने विषय करिब प्रष्ट भैसकेको छ।